Ikhaya DataNumen Ozakwethu
At DataNumen, sifuna futhi samukele ubudlelwano ukuze sandise ukufinyelela emakethe futhi sinikeze amakhasimende ethu izivumelwano ezengeziwetary imikhiqizo nezinsizakalo ezithuthukisa utshalomali kanye nolwazi lwazo nazo DataNumen.
Sizinikela ngezinsizakusebenza ezinkulu ezinhlelweni zethu zomlingani ezithuthukisiwe; kufaka phakathi ukuqeqeshwa, ukumaketha, izinsizakalo zobuchwepheshe kanye nokwesekwa kwentuthuko.
izinhlobo DataNumen Izinhlelo zozakwethu
Uhlelo lwe-Enterprise Solution Partner
Ozakwethu bezixazululo zebhizinisi bangukhiye we DataNumenImizamo yokwandisa ukufinyelela kwezixazululo zebhizinisi. DataNumen nabalingani bayo bahlinzeka ngezinsizakusebenza nezinhlangano zobungcweti ezidinga ukunciphisa ukulahleka kwenhlekelele yedatha, zikhuphule ukusebenza ngokusebenza, futhi zenze ngcono isipiliyoni samakhasimende abo.
Uhlelo lozakwethu abahlangene
Uhlelo lokusebenzisana luyithuba elihle lokuthi uzuze imali ngokuthengisa imikhiqizo yethu yokuthola idatha. Uma ungumnikazi noma uphatha iwebhusayithi, ungabamba iqhaza ezinhlelweni zethu zokubambisana. Samukela noma ngubani, kubantu abagcina ikhasi elincane lekhaya labo kumamagazini, izingosi, nasezitolo.
DataNumen inikeza ithuba lokuthi abathengisi kabusha benze imali eyengeziwe ngokujoyina i- DataNumen Uhlelo Lokusebenzisana Nozakwethu. Inqubo elula yokubhalisa izokuvumela ukuthi ube yingxenye yezwe elikhulu kunawo wonke kanye no-most uhlelo lokuthengisela umkhiqizo umkhiqizo ngempumelelo.
Ukushintshanisa izixhumanisi namanye amawebhusayithi ahlobene nokuqukethwe kuyindlela enhle yokwenza intshisekelo nokuthakazelisa kuwebhusayithi yakho. Ngaphandle kwezivakashi ezifudukela ngqo kusayithi lakho zisuka kozakwethu bokushintshana ngezixhumanisi, inzuzo yokwanda kwethrafikhi etholwe ngokuthola iwebhusayithi yakho igxilwe ngama-hyperlink nakho kungaba kukhulu.